Nepal COVID-19 Tracker | Vriya Technologies | Information
विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोरोनाभाइरस सम्बन्धि जानकारी
श्रोत - विश्व स्वास्थ्य संगठन
कोरोनाभाइरस रोग (COVID-19)भाइरसको कारण उत्पन्न भएको नयाँ संक्रामक रोग हो। यो रोगले फ्लू जस्तै श्वासप्रश्वास सम्वन्धित खोकी, ज्वोरो, र अधिक गाह्रो अवस्थामा, सास फेर्न गाह्रो लक्षणहरू निमत्याउछ। हात बारम्बार धुने, अनुहार नछुने, र अस्वस्थ मानिसहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा नरहने (कम्तीमा पनि १ मिटर वा ३ फिट टाधा) गरी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कसरी फैलिन्छ:
कोरोनाभाइरस रोग मुख्यतया संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कको माध्यमबाट फैलिन्छ जब उनीहरू खोकी वा हाच्छिउं गर्छन। कुनै व्यक्तिले भाइरस भएको सतह वा वस्तुमा छुन्छन् अनि आफ्नो आँखा, नाक, वा मुख छोएमा पनि यो रोग सर्दछ।
लक्षणहरू विकास हुनु वा देखा पर्नु अगाबै मानिसहरु १ देखि १४ दिनसम्म भाइरसको साथ बिरामी पर्न सक्छन्। कोरोनाभाइरस रोगको सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू (COVID-19)ज्वरो, थकान, र सुख्खा खोकी हो। अधिकांश व्यक्तिहरू (करीव ८०%) विशेष उपचारको आवश्यकता बिना नै निको हुन्छन्।
अधिक विरलै, यो रोग गम्भीर र घातक पनि हुन सक्छ। पाको उमेरका व्यक्तिहरू, अन्य चिकित्सा अवस्था भएका व्यक्तिहरू (जस्तै दम, मधुमेह, वा हृदय रोग) गम्भीर बिरामी हुने बढी जोखिममा हुन सक्छन्।
त्येस्ता व्यक्तिहरूले निम्न अनुभव गर्न सक्छन् -
सास फेर्न कठिनाई (गम्भीर परिस्थितिमा)
कोरोनाभाइरस रोग (COVID-19) लाई रोक्नको लागि हाल कुनै भ्याक्सिन छैन। तपाईं आफैंलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र भाइरस अरूलाई फैलाउन रोक्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं -
२० सेकेन्डका लागि आफ्ना हात धुनुहोस्।
२० सेकेन्डका लागि आफ्ना हातहरू नियमित रूपमा साबुन र पानी वा सानिटाइज़रले धुनुहोस्।
खोक्दा वा हाच्छिउं लाग्दा छोप्नुहोस्।
खोक्दा वा हाच्छिउं लाग्दा तपाइँको नाक र मुखलाई डिस्पोजेबल टिश्यु वा तपाइको कुहिनोले छोप्नुहोस्।
अस्वस्थ मानिसहरूबाट टाढा रहनुहोस्।
अस्वस्थ मानिसहरूबाट १ मिटर वा ३ फिट टाढा रहनुहोस्।.
अस्वस्थ महसुस भईरहेको छ भने टाढा बस्नुहोला।
यदि तपाईलाई अस्वस्थ महसुस भईरहेको छ भने घरमै बस्नुहोस् र घरका अन्य सदस्यबाट टाढा बस्नुहोला।
हातहरू सफा छैनन् भने नछुनुहोस्
यदि तपाईंको हातहरू सफा छैनन् भने तपाईंको आँखा, नाक, वा मुख नछुनुहोस्।
कोरोनाभाइरस रोग (COVID-19) लाई रोक्ने वा उपचार गर्ने कुनै विशेष औषधि छैन। रोग लागेमा मानिसहरूलाई सास फेर्न अफ्ट्यारो हुनेहुदा, उनीहरूलाई सहयोगी हेरचाह आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईंलाई हल्का लक्षणहरु देखापरेमा, निको नहोउन्जेल घरमा बस्नुहोस्। तपाइँले आफ्ना लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँले -:
प्रसस्त मात्रामा आराम गरेमा
आफुलाई न्यानो राखेमा
धेरै तरल पदार्थ पिएमा
कोठामा ह्युमिडिफायर प्रयोग गरेमा वा खोकी र दुखाइ कम गर्न तातो स्नान लिनुहोस्
यदि तपाईंलाई ज्वरो, खोकी र सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने तुरुन्तै चिकित्सा सेवा लिनुहोस्। अग्रिम कल गर्नुहोस् र तपाईंको स्वास्थ्य प्रदायकलाई कुनै भर्खरको यात्रा वा यात्रुहरूको साथ हालको सम्पर्कको कुरा बताउनुहोस्।
जेष्ठ नागरिक र चिकित्सा सम्बन्धि समस्या भएका मानिसहरु
COVID-19 धेरैजसो जेष्ठ नागरिक र चिकित्सा सम्बन्धि समस्या भएका मानिसहरुमा घातक हुने प्रमाणित भएको छ।
७० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएको र चिकित्सा सम्बन्धि समस्या भएका मानिसहरुलाई COVID-19 को सबैभन्दा अधिक जोखिम हुनेगर्दछ। यस डेटाबाट हेर्न सकिन्छ कि जेष्ठ नागरिकहरु युवाहरुको तुलनामा निकै नै अधिक जोखिममा हुनेगर्दछन् ।
७० - ७९ ८%
५० - ५९ १.३%
४० - < ०.५%
उपलब्ध डेटाको साथै १० वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुको मृत्युको सूचना आएको छैन, र COVID-19 को कारण बच्चाहरुको मृत्यु दर निकै कम छ।
पूर्व-स्थित चिकित्सा सम्बन्धि समस्या भएका मानिसहरुले एक समान कथा बस्तु बताउछन् - अन्तर्निहित चिकित्सा सम्बन्धि समस्या भएका मानिसहरु बिना कुनै पूर्वनिर्धारित चिकित्सा सम्बन्धि समस्या भएका मानिसहरुको तुलनामा अधिक जोखिम मा हुने गर्दछन् |
हृदय रोग १०.५%
जीर्ण श्वसन रोग ६.३%
उच्च रक्तचाप ६.०%
ककेहि स्वस्थ स्तिथि नभाको ०.९%
यी सबै डेटा यहि अंकित गर्दछन् कि यदि तपाई माथि तोकिएको कुनै पनि श्रेणीमा पर्नु हुन्छ भने तपाई COVID- 19 बाट उच्च जोखिममा पर्नु हुन्छ र तपाईले बिशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यकता पर्दछ।
उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरुको लागि अतिरिक्त सावधानीहरु
माथिको उल्लेखित उच्च जोखिम वर्गमा व्यक्तिहरूले गाईडमा तोकिएका बाहेक अतिरिक्त सावधानीहरू पालना गर्नुपर्दछ।
खाद्यन्न र घरेलू सामग्रीको भण्डार गर्नुहोस् र चाहिएको बखत मात्र किन्न जाने गर्नुहोस्।
अरूबाट सुरक्षित दूरी कायम गर्न अतिरिक्त सावधानी राख्नुहोस् (१ मीटर आदर्श रूपमा)
निकै आवश्यक काम पर्ने अवस्थामा सार्वजनिक सम्पर्क सिमित गरेर पटक पटक हात धुनुहोस्।
सकेसम्म भीडहरूबाट जोगिनुहोस्।
सबै अनावस्यक यात्रालाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
यस प्रकोप को मामला मा अतिरिक्त स्वास्थ्य औषधिहरु को बारे मा सोधपुछ गर्न, आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक (डाक्टर / क्लिनिक / अस्पताल) लाई सम्पर्क गर्नुहोस् - तपाई लामो समय सम्म घर भित्र बस्नु पर्ने पनि हुन सक्छ।
यदि तपाईं बिरामी हुनुभयो भने आपूर्ति (टिशूहरू इत्यादि) र औषधीहरू काउन्टरमा खरीद गर्न सकिन्छ र आधारभूत घरेलु उपचारहरूको पनि आवश्यक पर्नसक्दछ । अधिकांश व्यक्तिहरू घरमा ठिक हुन सक्षम हुदछन् ।
किराना सामानहरू उपत्युक्त मात्रामा राख्नुहोस् कुनै ओअनि अनावश्यक बाह्य सम्पर्कबाट बच्नक लागि ।
यदि COVID-19 तपाईंको क्षेत्रमा फैलदै छ भने
अरूबाट सुरक्षित दूरी सुनिश्चित गर्न थप उपायहरू लिनुहोस्
सकेसम्म घरमा बस्नुहोस्।
परिवार, सामाजिक वा व्यापारिक नेटवर्क मार्फत तपाईंको घरमा आपूर्तिहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू विचार गर्नुहोस्।
काल्पनिक र नक्कली समाचार
संजाल प्रसारण भइरहेको मिथक, नक्कली, र भ्रामक समाचारहरु तपाँई र अरुको लागि खतरनाक छ। कुनै पनि जानकारी साझेदारी नगर्नुहोस् जुन तपाईं आफैले प्रमाणित गर्नुभएको छैन वा त्यो आधिकारिक स्रोतबाट होईन, यसले राम्रो भन्दा बढि नोक्सान पुर्‍याउँछ। यहाँ हामीले COVID-19 को बारेमा साधारण मिथक र नक्कली समाचारहरूको सूची तयार गरेका छौं। हामीले प्रमाणित स्रोत थप गरेका छौं जसले यो प्रमाणित गर्दछ।
के पानी पिउदा र घाँटी ओसिलो राख्दा COVID-19 मर्दछ?
यो सत्य होईन, सामाजिक संजालमा सन्देश दिइएको छ कि तातो पानी पिउदा र घाँटी ओसिलो राख्सदा संक्रमण रोक्न सकिन्छ। यो मिथक हो | सन्देशहरूले पनि विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरु पनि उद्धृत गर्ने गर्दछन्। यो मिथक हो। तातो वा चिसो पानी पिउँदा कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै वास्तविक प्रमाण छैन।
के COVID-19 हावा मार्फत फैलिन्छ?
यो सत्य होईन, COVID-19 एयरबोर्न छैन - यसको मतलब यो हावाबाट फैलिदैन। यो संक्रमित व्यक्तिहरूको नाक र मुखबाट भाइरससहितको थोपाहरू मार्फत फैलिन्छ। हावाबाट नफैलिने भएता पनि यसको पर्याप्त जोखिम छ किनकि यो भाइरस अत्यन्त संक्रामक छ। आवश्यक सावधानीहरूको लागि तल दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
के तातो स्नान गर्नाले कोरोनाभाइरस रोगलाई रोक्न सकिन्छ?
यो सत्य होईन, तातो पानीले नुहाउँदा तपाईंले COVID-19 लग्नबाट रोक्न सकिन्दैन। तपाईंको नुहाउने तापमानको पर्वाह नगरी, प्रायः तपाईंको सामान्य शरीरको तापक्रम ३६.५ डिग्री सेल्सियस देखि ३७ डिग्री सेल्सियसको आसपासमा रहन्छ। वास्तवमा, एकदम तातो पानीले नुहाउनु हानिकारक हुन सक्छ, किनकि यसले तपाईंलाई जलाउन सक्छ। COVID-19 बाट आफूलाई बचाउने उत्तम तरिका भनेको तपाईका हातहरू बारम्बार सफा गर्नु हो। यो गरेर तपाईंले भाइरसहरू हटाउनुहुनेछ जुन तपाईंको हातमा हुन सक्छ र संक्रमणबाट बच्न सक्नुहुन्छ जुन त्यसपछि तपाईंको आँखा, मुख र नाकमा छोएर हुन सक्छ।
के चिसो मौसम र हिउँले कोरोनाभाइसलाई मार्न सक्छ?
यो सत्य होईन, विश्वास गर्नलाई कुनै प्रमाण छैन कि चिसो मौसमले नयाँ कोरोनाभाइरस वा अन्य रोगहरूलाई मार्न सक्छ। बाह्य तापमान वा मौसमको पर्वाह नगरी सामान्य मानव शरीरको तापक्रम ३६.५ डिग्री सेल्सियस देखि ३७ डिग्री सेल्सियसको आसपास रहन्छ। नयाँ कोरोनाभाइरसबाट आफूलाई जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको तपाईंको हातहरू बारम्बार मदिरामा आधारित सेनिटाइजरले सफा गर्नु वा साबुन र पानीले धुनु हो।
के लामखुट्टेको टोकाइले यो रोग सार्न सक्छ?
यो सत्य होईन, आजसम्म एस्तो कुनै जानकारी छैन र कुनै प्रमाण छैन कि नयाँ कोरोनाभाइरस लामखुट्टेले सार्न सक्छ। नयाँ कोरोनाभाइरस एक श्वासप्रश्वासको विषाणु हो जुन मुख्य रूपले संक्रमित व्यक्ति खोकी वा थुकको थोपा वा नाकबाट डिस्चार्ज हुँदा उत्पन्न हुने थोपाहरू मार्फत फैलिन्छ। आफैंलाई जोगाउनका लागि तपाईका हातहरू बारम्बार मदिरामा आधारित सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस् वा साबुन र पानीले धुनुहोस्। साथै, खोकी र हाच्छिउं लाग्ने जो कोहीसँग घनिष्ठ सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्।
के हाथ सुखाउने मशीन नयाँ कोरोनाभाइरसलाई मार्न प्रभावकारी छन्?
यो सत्य होईन, हाथ सुखाउने मशीन कोरोनाभाइरसलाई मार्न प्रभावी छैनन्। नयाँ कोरोनाभाइरसबाट आफूलाई जोगाउन, तपाईंले बारम्बार हातहरू मदिरामा आधारित सनितैज़रले सफा गर्नुपर्छ वा त्यसलाई साबुन र पानीले धुनु पर्छ। एकचोटि तपाईका हातहरू सफा भएपछि, तपाईंले कागजको तौंलीया वा तातो एयर ड्रायरको प्रयोग गरेर त्यसलाई राम्ररी सुकाउनु पर्छ।
के पराबैंगको कीटाणुशोधन बत्तीले नयाँ कोरोनाभाइस मार्न सक्छ?
यो सत्य होईन, UV बत्तीहरू हात वा छालाको अन्य क्षेत्र सेनिटाइज गर्नु प्रयोग हुँदैन किनकि विकिरणले छालामा जलन पैदा गर्न सक्छ।
नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन थर्मल स्क्यानरहरू कत्तिको प्रभावकारी छन्?
थर्मल स्क्यानरहरू ति मानिसहरूलाई पत्ता लगाउन प्रभावकारी छन् जसलाई कोरोनाको संक्रमण भएर ज्वरो विकास गरेका छन् (अर्थात् शरीरको सामान्य तापमान भन्दा उच्च छ)। संक्रमित व्यक्तिहरू जसलाई संक्रमण भइसक्यो तर ज्वोरोको लक्षण छैन, तेस बखत थर्मल स्क्यानरहरू प्रभावकारी हुदैनन् किन भने ज्वरोको विकास हुनलाई २ देखि १० दिनको सम्मको समय लाग्न सक्छ।
के तपाईको सम्पूर्ण शरीरमा रक्सी वा क्लोरीन लगाउने गर्दा नयाँ कोरोनाभाइरस मार्न सक्छ?
यो सत्य होईन, यदि तपाईंको शरीरमा भाइरसहरू प्रवेश गरिसके भने, सम्पूर्ण शरीरमा रक्सी वा क्लोरीनका स्प्रेयरले ले पनि भाइरसहरू मार्नेछैनन् । त्यस्ता पदार्थहरूको स्प्रे गर्दा कपडा वा आँखा, मुखक लागि हानिकारक हुन सक्छ । सतर्क रहनुहोस् दुबै रक्सी र क्लोरीन सतहहरूको कीटाणुशोधन गर्नको लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर तिनीहरूलाई उपयुक्त सिफारिसहरू अन्तर्गत प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ।
के न्यूमोनिया बिरूद्ध खोपहरूले नयाँ कोरोनाभाइरस विरूद्ध तपाइँको सुरक्षा गर्दछ?
यो सत्य होईन, निमोनिया बिरूद्ध खोपहरू, जस्तै न्यूमोकोकल भ्याक्सिन र हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा प्रकार बी खोप, नयाँ कोरोनाभाइरसको बिरूद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दैन। भाइरस यति नयाँ र फरक छ कि यसको आफ्नै खोप चाहिन्छ। अन्वेषकहरू 2019-nCov को बिरूद्ध खोप विकास गर्न कोशिस गर्दैछन्, र विश्व स्वास्थ संगठनले उनीहरूको प्रयासलाई समर्थन गर्दै छ। यी खोपहरू 2019-nCov बिरूद्ध प्रभावकारी नभए तापनि, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूका विरूद्ध खोप तपाईंको स्वास्थ्यलाई बचाउन सहायता गर्दछ।
के तपाईको नाकमा नियमित रूपमा सलायिन पानिले सफा गर्दा नयाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्छ?
यो सत्य होईन, कुनै प्रमाण छैन कि नियमित रूपमा नाकलाई सलायिन पानिले सफा गर्दा व्यक्तिलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सहयोग मिल्दछ। केही सीमित प्रमाणहरू छन् कि तपाईको नाकमा नियमित रूपमा सफा गरेका कारणले गर्दा साधारण चिसोबाट धेरै चाँडो निको हुन मद्दत गर्न सकिन्छ। यद्यपि नियमित रूपमा नाक धुनु भनेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हैन ।
के लसुन खानेले नयाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई रोक्न मद्दत गर्दछ?
लसुन एक स्वस्थ खाना हो र येस्मा केहि एन्टिमाइक्रोबियल गुण हुन सक्छ। यद्यपि अहिले सम्म कुनै प्रमाण छैन कि अहिलेको प्रकोपबाट लसुन खानाले मानिसहरूलाई नयाँ कोरोनाभाइरसबाट जोगाएको छ।
के नयाँ कोरोनाभाइरसले बढी उमेर भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र असर गर्दछ कि जवान व्यक्तिहरू पनि यस रोग संग संवेदनशील छन्?
सबै उमेरका व्यक्तिहरू नयाँ कोरोनाभाइरस (2019-nCov) बाट संक्रमित हुन सक्छन्। पाको उमेरका व्यक्तिहरू, र पूर्व अवस्थित चिकित्सा अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई (जस्तै दम, मधुमेह, हृदय रोग) भाइरसको साथ गम्भीर बिरामी हुने बढी जोखिमपूर्ण देखिन्छ। विश्व स्वास्थ संगठनले सबै उमेरका मानिसहरूलाई भाइरसबाट आफूलाई जोगाउन कदम चाल्न सल्लाह दिन्छ, उदाहरणका लागि राम्रो हात स्वच्छता र राम्रो श्वासप्रश्वासको स्वच्छता अनुसरण गरेर।
के एन्टिबायोटिकहरू नयाँ कोरोनाभाइरसलाई रोक्न र उपचार गर्न प्रभावकारी छन्?
यो सत्य होईन, एन्टिबायोटिकले भाइरससँग काम गर्दैन, केवल ब्याक्टेरियाहरू संग काम गर्दछ। नयाँ कोरोनाभाइरस (2019-nCov) एक भाइरस हो र यसैले, एन्टिबायोटिक यस रोगको रोकथाम वा उपचारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म, यदि तपाइँ 2019-nCoV को लागी अस्पतालमा भर्ती हुनुहुन्छ भने तपाईले एन्टिबायोटिक लिन सक्नुहुन्छ किनभने ब्याक्टेरिया को इन्फेक्शन सम्भव छ।
के नयाँ कोरोनाभाइरस रोक्न वा उपचार गर्न केहि औषधीहरू छन्?
आजको समय सम्म, नयाँ कोरोनाभाइरस (2019-nCov) लाई रोक्न वा उपचार गर्न कुनै विशेष औषधि छैन। यद्यपि भाइरसबाट संक्रमितहरूले लक्षणहरू कम सकिन्छ र उपचारका लागि उचित ध्यान दिनु पर्दछ र गम्भीर बिरामी भएकाहरूले उपयुक्त देखभाल पनि लिनु पर्छ। केहि विशिष्ट उपचारहरू अनुसन्धान अन्तर्गत छन्, र क्लिनिकल परीक्षण मार्फत परीक्षण गरिने छ। विश्व स्वास्थ संगठनले साझेदारहरूसँग अनुसन्धान र विकास प्रयासहरू छिटो गर्न मद्दत गरिरहेको छ।
घर संगरोधका लागि दिशानिर्देशन
COVID-19 of को गृह संगरोध मार्गनिर्देशनहरू तल दिइएका छन्।
व्यक्ति र घरका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइ, आधारभूत आईपीसी उपायहरू र परिवारको सदस्यलाई COVID - १९ को संक्रमण सम्भव भएमा कसरि स्याहार गर्ने बारेमा ज्ञान हुनु पर्छ।
व्यक्ति र परिवारलाई निरन्तर समर्थन र शिक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ र संक्रमणको समयमा राम्ररी हेरचाह जारी रहनु पर्छ।
व्यक्ति र परिवारले निम्न सिफारिसहरूको पालना गर्नुपर्दछ:-
व्यक्तिलाई राम्रो हावामा चल्ने एकल कोठामा राख्नुहोस् (उदाहरणका लागि खुला झ्याल र ढोका भएको)
घरमा व्यक्तिको आवागमन सीमित गर्नुहोस् र साझा स्थान कम गर्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि साझेदारी गरिएका ठाउँहरूमा (उदाहरणका लागि किचन, बाथरूम) राम्रो हावा चलेको छ (उदाहरणका लागि झ्याल खुला राख्नुहोस्)।
घरका सदस्यहरू फरक कोठामा बस्नुपर्दछ वा, यदि यो सम्भव छैन भने। बिरामी व्यक्तिबाट कम्तिमा १ मीटर टाढा राख्नुहोस्।
हेरविचारकर्ताहरूको संख्या सीमित गर्नुहोस्, आदर्श रूपमा एक व्यक्तिलाई हेरचाहको जिम्मा दिनुहोस् जो राम्रो स्वास्थ्यमा छ र अन्तर्निहित क्रॉनिक वा इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड अवस्था छैन। व्यक्ति पूर्ण रूपमा निको नभएसम्म र कुनै लक्षण र लक्षणहरू नभएसम्म आगन्तुकहरूलाई अनुमति दिइनु हुँदैन।
कुनै व्यक्ति वा उनीहरूको तत्काल वातावरणको सम्पर्कमा परेपछि हातलै साबुन पनिले धुनुहोस्। खानाको अगाडि र पछाडि, खाना खाँदा, शौचालयहरू प्रयोग गरिसकेपछि र हातहरू फोहर लाग्नेबित्तिकै हातलाई पर्दछ। यदि हातमा देखिने फोहोर छैनन् भने मदिरा-आधारित हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्न मिल्छ फोहोर हातका लागि, साबुन र पानी प्रयोग गर्नुहोस्।
साबुन र पानीले हात धुँदा, सुखा कागजको तौलियाले हात पुछ्ने। यदि यी उपलब्ध छैनन् भने सफा कपडाको प्रयोग गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई भिजेको खण्डमा बदल्नुहोस्। डिस्पोजेबल कागज तौलिया बन्द डिब्माबामा मात्र डिस्पोजल गर्नुपर्छ।
श्वासप्रश्वासको फोहोर समावेश गर्न, एक मेडिकल मास्क व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ र यथासम्भव लगाउनु पर्छ। मुख र नाक ढाक्नका लागि प्रयोग गरिने सामग्रीहरू उपयुक्त प्रयोग पछि उचित ढंगले खारेज वा सफा गरिनुपर्दछ (जस्तै, नियमित साबुन वा डिटर्जेंट र पानी प्रयोग गरेर रुमाल धुनुहोस्)।
संक्रमित व्यक्तिको उहि कोठामा हुदा हेरचाह गर्नेहरूले कडा फिट भएको मेडिकल मास्क लगाउनु पर्छ जसले तिनीहरूको मुख र नाक ढाक्छ। प्रयोगको समयमा मास्कलाई छोइराख्नु हुँदैन र यदि मास्क भिजेको वा स्रावबाट फोहोर भयो भने होसियारीसाथ, यो तुरुन्त नयाँ सफा, सुक्खा मास्कको साथ बदल्नु पर्छ। उपयुक्त हिसाबमा मास्क हटाउनुहोस् - अगाडी नछुनुहोस् अनि होसियारीसाथ फुकाएर तुरुन्तै खारेज गर्नुहोस् र हात स्वच्छता गर्नुहोस्।
शरीरको तरल पदार्थहरू, विशेष गरी मौखिक वा श्वासप्रश्वासको साथै स्राव, र मललाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन नदिनुहोस्। मौखिक वा श्वासप्रश्वासको देखभाल प्रदान गर्दा र मल, मूत्र ह्यान्डल गर्दा डिस्पोजेबल पन्जा र मास्क प्रयोग गर्नुहोस् र फोहोर मास्क र पन्जा हटाउनु अघि र पछाडि हात सफा गर्नुहोस्।
मास्क वा पन्जाहरू पुन- प्रयोग नगर्नुहोस्।
व्यक्तिको लागि समर्पित कपडा र खाने भाँडा प्रयोग गर्नुहोस्; यी वस्तुहरूको प्रयोग पछि साबुन र पानीको साथ सफा गर्नुहोस् र फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई ६०- ९० डिग्री सेल्सियसमा सामान्य घर डिटर्जेंटको साथ धुनुपर्छ, र राम्ररी सुकाउनु पर्छ। दूषित मलिनलाई धुने झोलामा राख्नुहोस्।
व्यक्तिको देखभाल भइरहेको कोठामा दैनिक सतहहरू जुन बारम्बार छोइन्छ जस्तै बेडसाइड टेबल, ओछ्यान फ्रेम र अन्य बेडरूम फर्नीचर इत्यादीलाई सफा र कीटाणुरहित बनाउनुहोस्। नियमित घर सफाईको लागि सर्वप्रथम साबुन वा डिटर्जेंट प्रयोग गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि, ०.५% सोडियम हाइपोक्लोराइट (अर्थात्, ५००० पीएम वा १ भाग ब्लीच बराबर ५ देखि ९ भाग पानी) भएको साधारण घरेलु कीटाणुनाशक प्रयोग गर्नुपर्छ।
दिनको कम्तिमा एक पटक बाथरूम र शौचालयको सतहलाई सफा र कीटाणुरहित गर्नुहोस्। नियमित घर सफाईको लागि सर्वप्रथम साबुन वा डिटर्जेंट प्रयोग गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि, ०.५% देखि १% सोडियम हाइपोक्लोराइट भएको साधारण घरेलु कीटाणुनाशक प्रयोग गर्नु पर्छ।
व्यक्तिको तत्काल वातावरणबाट दूषित वस्तुहरूको जोखिमका अन्य प्रकारहरू (उदाहरणका लागि दात माझ्ने ब्रुष, सिगरेट साझेदारी नगर्नुहोस र खाने भाँडा, पेय, तौलिया वा ओछ्यानको कपडा) नजिकको सम्पर्कमा आउन नदिनुहोस्।
यति बेला के गर्ने ?
म संक्रमित छु
स्रोत:- रोग नियन्त्रण केन्द्र (CDC)
यदि तपाईं COVID-19 बाट बिरामी हुनुहुन्छ वा शंका लागेको छ भने, रोग नियन्त्रणलाई मद्दत गर्नको लागि तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् जसले रोगलाई घर र समुदायमा फैलिनबाट जोगाउछ।
चिकित्सा स्याहार प्राप्त गर्नको साटो घरमा रहने
घरमै बस्नुहोस् - COVID- 19 बाट हल्का बिरामी भएका व्यक्तिहरू आफ्नो रोगको समयमा घरमा अरुबाट अलग हुन सकिन्छ। तपाईले आफ्नो घर बाहिरका गतिविधिहरू, चिकित्सा उपचार बाहेक अरु कार्यहरू प्रतिबन्धित गर्नुपर्दछ।
सार्वजनिक क्षेत्रहरूबाट बच्नुहोस् - काम, स्कूल वा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा नजानुहोस्।
सार्वजनिक यातायातमा नचध्नुहोस् - सार्वजनिक यातायात, सांझा सवारी वा ट्याक्सीहरूको प्रयोग गर्नबाट बच्नुहोस्।
तपाईंको घरमा अन्य व्यक्ति र जनावरहरूबाट आफूलाई अलग गर्नुहोस
अरूबाट टाढा बस्नुहोस् - सकेसम्म तपाईले एउटा विशेष कोठामा र तपाईको घरका अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्नु पर्छ। साथै, यदि उपलब्ध छ भने तपाईंले छुट्टै बाथरूम प्रयोग गर्नुपर्छ।
घरपालुवा जनावरहरू र जनावरहरूसँगको सम्पर्क सीमित गर्नुहोस् - तपाईं COVID-19 बाट बिरामी पर्दा घरपालुवा जनावरहरू र अन्य जनावरहरूसँगको सम्पर्कलाई अरुको ओरिपरि गरेझैँ प्रतिबन्धित गर्नुपर्दछ। हुनत अहिले सम्म घर पालुवा जनावर वा अन्य जनावरहरु COVID-19 बाट बिरामी परेको रिपोर्ट आएको छैन, तर सिफारिश गरिन्छ कि भाइरसको बारेमा अधिक जानकारी नभएसम्म COVID-19 बाट बिरामी मानिसहरूले जनावरहरूसँग सम्पर्क राख्नुहुन्न।
सम्भव भएमा, बिरामी पर्दा तपाईंको परिवारको अर्को सदस्यलाई जनावरहरूको हेरचाह गर्न राख्नुहोस्। यदि तपाईं COVID-19 बाट बिरामी हुनुहुन्छ भने, तपाईंको घर पालुवा जनावरसँग सम्पर्क नराख्नुहोस्। यदि तपाईं बिरामी भएको बेला जनावरहरूको वरिपरि बस्ने वा हेरचाह गर्नुहुन्छ भने, जनावरसँग सम्पर्क राख्नु अघि र पछि आफ्नो हात राम्ररी धुनुहोस् र मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईले डाक्टरलाई भेट्नु भन्दा पहिले कल गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग मेडिकल अपोइन्टमेन्ट छ भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुहोस् र उनीहरूलाई बताउनुहोस् कि तपाईंलाई COVID-19 छ वा हुन सक्छ। यसले स्वास्थ्य प्रदायकको कार्यालयले अरूलाई संक्रमित हुनबाट बचाउन चाहिने कदम परिचालन गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि बिरामी भएमा एउटा फेसमास्क लगाउनुहोस्
यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने - तपाईंले अन्य व्यक्तिहरू (उदाहरणको लागि, कोठा वा गाडी) वरपर वा घरपालुवा जनावरहरू संग कुनै सम्पर्क हुन अघि र हेल्थकेयर प्रदायकको कार्यालयमा प्रवेश गर्नु अघि तपाईंले फेसमास्क लगाउनु पर्छ।
यदि तपाई अरूको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ भने - यदि कोहि बिरामी छ र फेसमास्क सास फेर्न समस्याले गर्दा लगाउन असमर्थ छ भने, तिनीहरूसँग एउटै कोठामा नबस्नुहोस् र बिरामी भएको कोठामा प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा फेसमास्क लगाउनु पर्छ।
हाच्छिउं गर्दा, खोकी लाग्दा मुखलाई छोप्नुहोस्
ढाक्नु - तपाईंको मुख र नाकलाई टिसूले छोप्नुहोस् जब तपाईं खोकी वा हाच्छिउं गर्नुहुन्छ।
डिस्पोजल - प्रयोग गरिएको सामानहरूलाई प्य्लास्टिकराखिएकोडस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस्।
हात धुनुहोस् - कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले हात धुनुहोस् वा यदि साबुन र पानी उपलब्ध छैन भने, आफ्ना हातहरू कम्तिमा ६०% मदिरामा आधारित सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस्।
प्राय- आफ्ना हातहरूलाई सफा राख्नुहोस्
हात धुने - कम्तिमा २० सेकेन्ड सम्म साबुन र पानीले प्रायः आफ्ना हातहरू धुनुहोस्, विशेष गरी नाक बग्दा, खोकी वा हाच्छिउं गर्दा; बाथरूम जादा; र खाना खानु वा तयार गर्नु अघि।
सेनिटाइजर - यदि साबुन र पानी सजिलैसँग उपलब्ध छैन भने कम्तिमा ६०% मदिरामा आधारित हात सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंको हातको सबै सतहहरू छोप्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुकाउनुहोस्।
साबुन र पानी - हात मैला छ भने साबुन र पानी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
अनुहार नछुनुहोस् - अनावश्यक रूपमा फोहोर हातले आफ्नो आँखा, नाक र मुख नछुनुहोस्।
व्यक्तिगत घरेलु वस्तुहरू साझा गर्नबाट रोक्नुहोस्
साझेदारी नगर्नुहोस् - तपाईंले आफ्नो घरमा भाँडा, चश्मा, कप, खाद्यान्नको भाँडा, तौलिए वा ओछ्यान अन्य व्यक्तिहरू वा घरपालुवा जनावरहरूसँग साझेदारी गर्नु हुँदैन।
प्रयोग पछि राम्रोसँग धुनुहोस् - प्रयोग गरेपछि तिनीहरूलाई साबुन र पानीले राम्ररी धुनु पर्दछ।
दैनिक "उच्च स्पर्श" सतहहरू सफा गर्नुहोस्
सफा र कीटाणुमुक्त - उच्च-स्पर्श सतहहरूको नियमित सफाई अभ्यास गर्नुहोस्। उच्च स्पर्श सतहहरूमा काउन्टर, टेबुल, शौचालयका सामाग्रीहरु, फोन, किबोर्ड, ट्याब्लेट, र बेडसाइड टेबल समावेश गर्दछ।
शारीरिक तरलता हुने क्षेत्रहरूलाई कीटाणुरहित गर्नुहोस् - थप रूपमा, रगत, मल, वा शरीरका तरलताहरू समावेश गर्न सक्ने सतहहरू सफा गर्नुहोस्।
घरेलु क्लीनर - लेबलको निर्देशन अनुसार घर सफा गर्ने स्प्रे वा वाइपको प्रयोग गर्नुहोस्। लेबलले सफाई सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगको लागि निर्देशनहरू समावेश गर्नुका साथै पन्जा लगाउने, प्रयोगको बखत राम्रो वायुसंचार भएको छ छैन सुनिश्चित गर्नु जस्ता सावधानी समावेश हुन्छन्।
तपाइँका लक्षणहरूको निरीक्षण गर्नुहोस्
चिकित्सकीय ध्यान खोज्नुहोस् - यदि तपाईंको रोग बिग्रँदै गइरहेको छ भने (जस्तै, सास फेर्न गाह्रो), तुरुन्तै स्वास्थ परामर्श वा उपचारमा ध्यान दिनुहोस्।
तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्नुहोस् - हेरचाह गर्नु अघि, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुहोस् र उनीहरूलाई बताउनुहोस् कि तपाईंलाई COVID-19 छ वा मुल्यांकन भइरहेको छ|
बिरामी हुँदा फेसमास्क लगाउनुहोस् - स्वास्थ सेवा सुविधामा प्रवेश गर्नु अघि फेसमास्क प्रयोग गर्नुहोस्। यी कदमहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको कार्यालयलाई संक्रमित हुनबाट वा कार्यालय वेटिंग रूममा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
स्वास्थ्य विभागलाई सूचित - आफ्नो स्थानीय वा राज्य स्वास्थ्य विभागलाई कल गरेर सूचित गर्नुहोस्। सक्रिय निगरानी वा आत्म-अनुगमन अन्तर्गत भएका व्यक्तिले आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग वा व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रदायकहरु द्वारा दिएका निर्देशनहरु पालना गर्नु पर्छ।
घरमा बन्द रहने
घर छोड्नु भनेर निर्देशन नदिएसम्म घरमा बस्नुहोस् - पुष्टि गरिएको COVID-19 का बिरामीहरू अरू माध्यमिक प्रसारणको जोखिम कम नभएसम्म घरमा अलग्गै बसेर सावधानी अपनाउनु पर्छ।
तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् - घरबाट अलग्गिएका सावधानीहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू तथा राज्य र स्थानीय स्वास्थ्य विभागहरूको परामर्श लिएर अवस्था अनुसारको आधारमा मात्र गर्नुपर्दछ।
म कोहि संक्रमित व्यक्तिलाई चिन्छु
घरका सदस्यहरू, आत्मीय साझेदारहरू र एक गैर-स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्समा हेरचाहकर्ताहरूले लाक्षणिक, प्रयोगशाला-पुष्टि COVID-19 वा शंका लागेका व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्पर्क हुन सक्छ। उनीहरुको स्वास्थ्य अनुगमन गर्नुपर्छ; यदि उनीहरूले COVID-19 को लक्षणहरू विकास गरे भने (उदाहरणका लागि, ज्वरो, खोकी, सासको कमी), तिनीहरूले तुरून्त स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुपर्नेछ।
नजिकका सम्पर्कहरूले पनि यी सिफारिसहरू पालना गर्नुपर्दछ
तपाईंले बिरामीलाई चाहिने औषधी र हेरचाहको लागि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको निर्देशनहरू बुझ्नु भएको छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। बिरामीलाई घरको आधारभूत आवश्यकता जस्तै किरानाको सामान, औषधिहरू र अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताहरू प्राप्त गर्न सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ।
बिरामीका लक्षणहरूको निरीक्षण गर्नुहोस्। यदि कोहि बिरामी भइरहेको छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि विरामीसँग प्रयोगशाला-द्वारा पुष्टि गरिएको COVID-19 छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको कार्यालयले अरूलाई कार्यालय वा प्रतीक्षालयमा अरूलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउनको लागि कदम चाल्न मद्दत गर्दछ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई थप निर्देशनका लागि स्थानीय वा राज्य स्वास्थ्य विभाग कल गर्न सोध्नुहोस्। यदि बिरामीको चिकित्सा आपतकालिन छ र तपाईंले ११३३ मा कल गरेर बिरामीलाई COVID-19 छ वा मुल्यांकन भइरहेको छ गर्ने।
घरका सदस्यहरू अर्को कोठामा बस्नुपर्दछ वा सकेसम्म रोगीबाट अलग हुनु पर्छ। उपलब्ध भएमा घरका सदस्यहरूले छुट्टै बेडरूम र बाथरूम प्रयोग गर्नु पर्छ।
घरमा बस्न अनिवार्य आवश्यकता नभएका आगन्तुकहरूलाई प्रतिबन्धित गर्नुहोस्।
घरका अन्य सदस्यहरूले घरमा कुनै घरपालुवा जनावर छ भने त्येसको हेरचाह गर्नुपर्छ। बिरामी हुँदा घरपालुवा जनावरहरू वा अन्य जनावरहरूलाई नहेर्नुहोस्।
मौसमले साथ दिएसम्म सुनिश्चित गर्नुहोस् कि घरको साझा स्थानमा हावा प्रवाह राम्रो छ - जस्तै एयर कन्डिशनर वा खुला झ्याल।
हात प्राय सफा गर्नुहोस्। कम्तिमा २० सेकेन्डको लागि साबुन र पानीले आफ्ना हातहरू पटक पटक धुनुहोस् वा ६०% देखि ९५% मदिरामा आधारित हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, र हातहरूको सबै सतहहरू सुख्खा पार्नुहोस् । हातहरू धेरै फोहोर भएमा साबुन र पानी नै प्रयोग गर्नु पर्छ।
अनावश्यक रूपमा फोहोर आफ्नो हातले आफ्नो नाक र मुख नछुनुहोस्।
यदि कोहि बिरामी छ र फेसमास्क सास फेर्न समस्याले गर्दा लगाउन असमर्थ छ भने, तिनीहरूसँग एउटै कोठामा नबस्नुहोस् र बिरामी भएको कोठामा प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा फेसमास्क लगाउनु पर्छ।
जब बिरामीको रगत, मल, वा शरीरको तरल पदार्थहरू जस्तै लार, थुक, नाक बलगम, बान्ता, पेशाबको संपर्कमा हुनुहुन्छ तब डिस्पोजेबल फेसमास्क र पन्जा लगाउनुहोस्।
- प्रयोग पछि डिस्पोजेबल फेसमास्क र ग्लोभ्स बाहिर फाल्नुहोस्। पुन प्रयोग नगर्नुहोस्।
- व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरू हटाउँदा, पहिले पन्जा निकाल्नुहोस् र डिस्पोज गर्नुहोस्। तुरुन्तै आफ्ना हातहरू साबुन र पानी वा मदिरामा आधारित सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस्।
बिरामीसँग घरेलु चीजहरू साझेदारी नगर्नुहोस्। तपाईंले भाँडा, चश्मा, कप, खाने भाँडा, तौंली, ओछ्यान, वा अन्य चीजहरू साझेदारी गर्नु हुँदैन। बिरामीले यी चीजहरू प्रयोग गरेपछि, तपाईंले तिनीहरूलाई राम्ररी धुनु पर्छ।
दैनिक "उच्च-स्पर्श" सतहहरू सफा गर्नुहोस्, जस्तै काउन्टरहरू, टेबुलहरू, ढोका समात्ने ठाउँ, बाथरूम फिक्स्चर, शौचालय, फोन, किबोर्ड, ट्याब्लेट, र बेडसाइड टेबलहरू। थप रूपमा, रगत, मल, वा शरीर तरल पदार्थहरू समावेश भएको सतहहरू सफा गर्नुहोस्।
लेबलको निर्देशन अनुसार घर सफा गर्ने स्प्रे वा वाइपको प्रयोग गर्नुहोस्। लेबलले सफाई सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगको लागि निर्देशनहरू समावेश गर्नुका साथै पन्जा लगाउने, प्रयोगको बखत राम्रो वायुसंचार भएको छ छैन सुनिश्चित गर्नु जस्ता सावधानी समावेश हुन्छन्।
लुगा कपडा राम्रोसँग धुनुहोस्।
- तुरुन्त ती कपडाहरू वा ओछ्यान हटाउनुहोस् जसमा उनीहरूको रगत, मल वा शरीर तरलहरू छन्।
- फोहर सामाग्री चलाउदा डिस्पोजेबल पन्जा लगाउनुहोस् र फोहर चीजहरू आफ्नो शरीरबाट टाढा राख्नुहोस्। पन्जाहरु खोले पछि तपाईंको हातहरू सफा गर्नुहोस् (साबुन र पानी वा मदिरामा आधारित सेनिटाइजरको साथ)।
- डिटर्जन्टहरूको लेबलमा निर्देशनहरू पढ्नुहोस् र पालना गर्नुहोस्। सामान्यतया, धुलाई मेशिनको निर्देशन अनुसार सामान्य लुन्ड्री डिटर्जेंट प्रयोग गरेर र कपडाको लेबलमा सिफारिस गरिएको अनुसार सकेसम्म तातो तापक्रममा धुने र राम्रोसँग सुकाउँदा।
अन्य घरका फोहोरसँग डिस्पोज गर्नु अघि प्रयोग गरिएको डिस्पोजेबल ग्लोभज, फेसमास्क र अन्य दूषित चीजहरू झोला भएको डस्त्बिनमा राख्नुहोस् । यी वस्तुहरू चलाउने बित्तिकै आफ्ना हातहरू (साबुन र पानी वा मदिरामा आधारित सेनिटाइजरको साथ) सफा गर्नुहोस्। हातहरू फोहोर भएमा साबुन र पानी नै प्रयोग गर्नु पर्छ।
तपाईंको राज्य वा स्थानीय स्वास्थ्य विभाग वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुनै थप प्रश्नहरूको छलफल गर्नुहोस्। कृपया सम्पर्क गर्दा खुल्ने र सेवा उपलब्ध समय निर्धारण गर्नुहोस।
COVID-19 पुष्टि भएका वा शंकास्पद व्यक्तिहरू जसलाई अस्पतालमा भर्ना हुन आवश्यक छैन वा भर्ना भएर ठिक अवस्था निर्धारण गरेर घर पठाईएकाहरुको लागि घर अलगाव गर्ने उपायहरु। तपाईंले तलको रोकथाम चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ जबसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा स्थानीय वा राज्य स्वास्थ्य विभागले बताउँदैन कि तपाईं आफ्नो सामान्य गतिविधिहरूमा फर्कन सक्नुहुन्छ -
राम्रो हावामा राखिएको गैर एसी कोठा
झ्याल दिनको समयमा खुला राख्ने
कोठामा संदिग्ध बिरामीको लागि जोडिएको बाथरूम वा छुट्टै बाथरूम हुनु पर्छ।
भाँडा, कपडा वा अन्य चीजहरू साझेदारी नगर्नुहोस्।
शौचालय र शरीर तरल पदार्थको साथ सम्पर्क पछि बारम्बार हात धुने अभ्यास गर्नुहोस्, विशेष गरी साबुन र पानीको साथ।
व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाउनुहोस्।
श्वसन स्वच्छता पालना गर्नुहोस्
- खोक्दा वा हाच्छिउं गर्दा मुख र नाकलाई मास्क वा टिश्युले छोप्नुहोस्
- यदि मास्क वा टिसु उपलब्ध छैन भने तपाई आफ्नो कुहिनो पछाडि खोक्ने वा हाच्छिउं गर्ने।
फोहोर संकलन गर्नका लागि तीन बाल्टिनहरू
- फोहर कपडा, तौलिया रुमाल - ब्लीचको साथ कीटाणुरहित गर्नुहोस्, अर्को प्रयोग हुनु अघि धुनुहोस् र घाममा सुकाउनुहोस्
- फोहोर मास्क, टिशूहरू, प्याडहरू - आगोमा नष्ट गर्नलाई
- बायोमेडिकल फोहरका लागि - गाड्नको लागि
ब्लीचले कोठाहरु पुस्ने पोछार लगाउने
ब्लीचको घोललाई फर्नीचर, सफा बेसिनहरू, शौचालय सिटहरू, इत्यादि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
देखभालकर्ताले कोठा द्वारमा मदिरामा आधारित सेनिटाइजर राख्ने र प्रयोग गर्ने
कुनै आगन्तुकलाई अनुमति दिइनु हुँदैन।
सभा, सामाजिक जमघट, पार्टीहरू आदिमा भाग लिनुहुन्न।
सार्वजनिक यातायातमा नचड्नु होला।